Haalli AMMA shawa dhihaa magalaa Gincii akkamalee namaa sodachisaa jirti. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHaalli AMMA shawa dhihaa magalaa Gincii akkamalee namaa sodachisaa jirti.
Haalli AMMA shawa dhihaa magalaa Gincii akkamalee namaa sodachisaa jirti.
Haalli AMMA shawa dhihaa magalaa Gincii akkamalee namaa sodachisaa jirti. HUmni Kora bitineessaa Ummaata IRRATII reebicha raawwachaa jirti. AMMA yoonaa Qeerroo sadii rasaasaan rukutanii jiru. Isaan keessaa tokko eeboon waraaname.
Ammallee akkaa malee ummata goolaa jiru
Qabsoon Bilisummaa Oromoo haga galii isaa gahutti qabsoon waliigalaa jabaatee akka itti fufu ABOn beeksise.
ABOn marii hayyoota Oromoo waliin magaalaa Asamaraatti guyyoota shaniif gaggeessaa ture irratti akka hubachiisetti, qabsoon Bilisummaa Oromoo kan xumura argatu, Bilisummaan Oromoo yoo mirkanaa’e qofaa dha.
Yeroo addaddaatti qabsoo Oromoo gara dabarsuuf yaaliiwwan godhmaa turan marti qabsoo Oromootiin maseenuu isaanii kan hubachiise ABOn, ammas taanaan fiixa bahiinsa qabsoo oromofo jabaatee akka hojjatu beeksiseera.
Mariin imaammata Oromiyaa Egeree irratti xiyyeeffates kan akeekame, kufaatii Wayyaanee booda biyya Oromiyaa deebisanii ijaaruuf haalduree qopheessuuf ture.
Marii kana irrattis, hayyooti Oromoo addunyaa keessa jiran dhimma imaammata dinagdee, qonnaa, barumsaa, miidiyaa, burmisoomaa fi eegaumsa naannoo irratti xiyyeeffate dhiyaatee irratti amryatameera.
ABOn walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf qabsoo hidhannoo kan eegale bara 1970moota keessa taúun kan yaadatamuudha.
#Odeessa-(WBO, 13 June 2018) Sochii WBOn Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruuf deeggarsi godhamu kan sirnaa fi naamusa qabsaa’ummaa eeggate akka taú dhaamame.
Qaamni dhimmi isaa ilaalu akka odeessa nuuna gaheetti, yeroo ammaa kana ummati keenya birmannaa guddaa WBOf gochaa jira.
Akka odeessi nu gahe ibsutti, ummati Oromoo roga hunda irraa WBO simachaa fi gargaaraa jira.
Birmannaa kunis, jabaatee akka itti fufu dhaamameera.
Gama kaaniin, yeroo WBOf deeggarsaa fi simannaa godhamu iccitiin akka hin baaneef ofeeggannoo cimaa godhamuu akka qabu dhaamameera.
“Yeroo kamitti iyyuu haala diinni keessa jiru irratti qaruuxummaan waleeguun barbaachisaa dha,”kan jedhe qaamni odeessa nuun gahe kun, “ Afeerraa fi simannaan WBOf godhamu kan sirnaa fi naamusa qabsaa’ummaa eeggate ta’uu qaba,”jedheera.
Kana malees, viidiyoo fi suuraalee WBO waraabanii facaasuu irraa akka of eeggatan qaamni kun jabeessee dhaameera
Hubachiisa: Sochii WBOn Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru deeggaruun ummati keenya birmannaa guddaa gochaa jiraachuun beekamaadha. Ummati keenya WBO simachaa fi gargaaraa jiratan hojii birmannaa itti jirataniif galata guddaa qabdu. Ammas deegagrsi keessan jabaatee akka itti fufu abdii guddaa qabna.
Gama kaaniin, yeroo WBOf deeggarsaa fi simannaa gootan ofeeggannoo cimaa gochuun barbaachisaa dha. Yeroo kamitti iyyuu haala diinni keessa jiru irratti qaruuxummaan waleeguun barbaachisaa dha. Afeerraa fi simannaan WBOf godhamus kan sirnaa fi naamusa qabsaa’ummaa eeggate akka ta’u waliif dhaamuun barbaachisaa dha.
Qabsoon haga galii isa agahuttti, jabaatee itti fufuu qaba!!
OPDO has dismissed more than 2000 of its local administrative staffs; demoted 540 from their positions & cancelled membership of more 3000